Semalt dia manolotra fampahalalana mahasoa momba ny hosoka amin'ny aterineto sy ny fomba hiarovana ny tenanao manohitra izany.
Ny orinasam-pandefasana (fitaterana) dia mahafantatra ireo mpangalatra mampiasa ny maha izy azy amin'ny fiarahamoninahaino aman-jery sy tranokala e-commerce mba hamitahana mpividy an'arivony izay mameno ireny tranonkala ireny.
Izany no fomba fiasa mahazatra azy ireo. Mandeha tranonkala e-commerce ianao, fantarona inona na inona tianao hividy, mandinika sy mameno ny dingana fandoavam-bola. Avy eo, ianao koa dia mahazo mailaka mangataka anao handoa vola amin'ny sambany alohaalefa izy. Misy ny fisamborana: ny mailaka dia tsy avy amin'ny orinasam-pifandraisana ofisialy, ary ny vola nangatahina mba handoavanaTsy haverina vola ary tsy hanampy amin'ny fanatanterahana ny baikonao. Ireo pejin-drindrina hafa tahaka ny trompetra loteria, izay nampahafantarina anao fa nahazo fandrosoana,loteria na loka ho an'ny fifaninanana izay tsy nandray anjara velively teo amin'ny toerana voalohany - registrazione dominio web.
Ny orinasam-pitrandrahana dia tsy manome tolotrasa antonony (trosa). Noho izany, aza manao izanyTsara ny miresaka momba ny fandoavam-bola amin'ny olona. Afaka mandeha an-tserasera ianao.
Ross Barber, ny Semalt Customer Success Manager, dia manoro hevitra anao hanaiky ny fampahalalana manaraka. Na dia misy nomerao nomena nyfitaterana, aza adino. Ny vokatra dia mety ho tafiditra ao anaty sari-tsarinao, nefa mety tsy ho eo an-tànan'ny entanaorinasa. Raha toa ianao ka misalasala, mifandraisa amin'ny orinasam-pandefasana na mitsidika ny tranonkalan'ny ofisialy. Izany dia hamantatra fa ny orinasam-pandefasanadia manana ny vokatra ao aminy..Avy eo dia afaka miala sasatra ianao amin'ny fanomezan-toky fa hahatratra anao ny entana.
Ny orinasam-pamokarana / orinasa dia manao izay rehetra azony atao mba hisorohana ny fanitsakitsahana ny aterineto.Ny sampan-draharahan'ny mpanjifany, ny sampan-draharaha misahana ny fitsarana sy ny fiarovana dia miara-miasa akaiky mba hahafantaranao fa (ny mpanjifa) dia mahalala ny mombamomba azy rehetra sy ny fombaafaho izy ireo. Ankoatra izany, miara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny eBay, Amazon, Western Union ary governemanta mba hitazonana azy ireo ihany koazavatra mihazakazaka tsara.
Inona no tokony hataonao raha jiolahy ianao?
Mba hahafahan'ny manampahefana ilaina hanakatona tranonkala iray hosoka, dia izy ireomiantehitra aminao mba hitatitra ireo asa mampiahiahy. Alefaso ny mailaka amin'ny adiresy nomena. Mariho fa tsy hahazo fampahafantarana ianao rehefa ianaoalefaso ny mailaka. Mety ho tsara ihany koa ny filazana amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana amin'ny filazana, ny polisy. Nisy tranga vitsivitsy, izaydia nahatonga fisamborana. Miaraka amin'ireo olon-dratsy ao ambadiky ny bara, azonao atao ny mankafy ny fahazoana an-tserasera.
Araka ny voalaza dia ilaina ny mitatitra ny tranga rehetra amin'ny hosoka amin'ny aterineto manokanaireo momba ny orinasa mpamonjy entana. Miaraka amin'ny vahoaka mahalala tsara an'ity fisainana ity, ireo tranga ireo dia ho toy ny zavatra taloha. Eto diafepetra sasany ampiasaina hanakanana hosoka an-tserasera:
> fivoriana eo amin'ny samy mpandray anjara tsirairay izay mikasa ny handinika ity olana ity
> famoahana gazetim-baovao tsy tapaka
> torolàlana momba ny fomba fiasan'ny fandefasana entana ho an'ny tsena. Izany dia azonao atao
Rehefa mamintina ianao, dia tadidio fa ampahafantarinao amin'ny namana iray ny zavatra nianaranao ka ataony ihany koatsy lasa niharam-pahavoazana.